I-78 EPHEZULU YENTOMBI KAMAMA EYINTLOKO IINGCINGA ZETATTOO- [2021 ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELA] - UHLOBO
I-78 ephezulu yeNtombi kaMama eyiNtloko Iingcinga zeTattoo- [2021 Isikhokelo sokuphefumlela]
Ubudlelwane phakathi kukamama nentombi yenye yezona zinto zinamandla ehlabathini. Abantu abaninzi bakhetha ukukhumbula olu thando lukhulu kunye ne tattoo efanayo okanye uyilo oludibeneyo.
Iitattoo zikamama zinokuza ngeendlela ezininzi, kodwa uthando luhlala lukhona. Ukusuka kwintliziyo elula, ukwenza umsebenzi weskripthi, amathuba okuthelekisa iitattoo zikamama zilinganiselwe kuphela kukucinga kwesibini kunye nobuchule begcisa labo kumvambo.
Ngelixa uluvo lokuba umama nentombi yakhe bafumane iitattoo ezifanayo zinokuvakala zingenakulindeleka ukuba ibe sisizukulwana esinye esidlulileyo kuphela, ukuthandwa okwandayo kunye nokutshintsha kwesimo sengqondo malunga neetattoos kudale ithuba lezi mementos zisisigxina zothando lomtshato.
Iziqwenga ezikule galari zimboniso nje omfutshane wento enokwenzeka xa uthando lukamama nentombi luyinkuthazo.
1. I-Watercolor umama kunye nentombi imibono ye tattoo
Umthombo: @paultattoos nge-Instagram
Umthombo: @watchamal_tattoo nge-Instagram
Umthombo: @ johnathan_tattoo_williams nge-Instagram
Umthombo: @anandasuniquehairdesign nge-Instagram
Umthombo: @kkkloe_ nge-Instagram
Umkhwa okhulayo kuluntu lwetattoo ubona amagcisa asebenzise imibala eqaqambileyo kunye nendlela ethe gabalala yobuchwephesha yokuphinda isiphumo sepeyinti ye-watercolor. Ngokubandakanya ulwandlalo olungqindilili kwaye uvumele imibala ukuba iphume kubo, lo mbala ngaphandle kwemigca yempembelelo yenziwa ngakumbi ngakumbi.
Yeyiphi indlela ebhetele yokubhiyozela uSuku lukaMama kunye noku kudibana okungapheliyo kunentombi yomama tattoo engapheliyo ?
2. Umama oyiNtombi eMnyama kunye neGrey
Umthombo: @tatmaz nge-Instagram
Umthombo: @sailorcher nge-Instagram
Umthombo: @ cschloss21 nge-Instagram
Umthombo: @stateplatesigns nge-Instagram
umvambo womnwe emva kweminyaka emi-5
Umthombo: @thequinceffect nge-Instagram
Umthombo: @cardeltattoos nge-Instagram
Umthombo: @tattoosbybsad nge-Instagram
Abanye abantu, ubungangamsha bomsebenzi omnyama nokungwevu awunakubethwa. Imigca echanekileyo kunye nokufiphaza okugudileyo okuluphawu lwesitayile kunokusetyenziswa kulo naliphi na inani leekhonsepthi kunye noyilo, nakumama kunye nentombi duo eyayixabisayo le ndlela yobuhle, ukhetho lucacile.
Ukusuka kwitattoo yeentyatyambo ehambelanayo esonga ngobunono esihlahleni, okanye umvambo wendlovu ohambahamba ngokubanzi, isibheno esidala somsebenzi omnyama nengwevu asinakuphikiswa. Ezi ziqwenga zibalaseleyo ziluhlobo nje lwento enokwenzeka nge-inki emnyama nengwevu, ukuqeshwa komvambo kunye nothando lukamama njengokhuthazo.
3. INkinki emnyama kunye neTattoo encinci
Umthombo: @ bri_55555 nge-Instagram
Umthombo: @jennybranch nge-Instagram
Umthombo: @ ashjensen718 nge-Instagram
Umthombo: @monnikenwerk nge-Instagram
Umthombo: @crazyapachetattoosandirons nge-Instagram
Umthombo: @ironiketattoos nge-Instagram
Umthombo: @stephydolltattoos nge-Instagram
Abanye abantu nkqu nokufiphaza kunye nokuthwalwa kweethoni kwisimboli esimnyama nesingwevu somntwana oyintombazana kunokuba yinto eninzi kakhulu. Uninzi lwabantu lukhetha ukusebenzisa i-inki emnyama ebonakalayo ukwenza uyilo lwe tattoo olufanayo kunye neziphumo ezilungileyo.
Enye itattoo eqhelekileyo exhaphakileyo esebenzisa le ndlela ithintelweyo ithatha i-inki emnyama kwaye yenza ulwandlalo lweentaka ezibhabhayo, nangona le ndlela ingaphelelanga kwii-silhouettes. Iimpawu ze-Yin kunye ne-yang, umqondiso welanga wokukhanya kwelanga, iisimboli ezingapheliyo kunye nezinye iitatto ezinkulu zikamama zinokwenziwa kusetyenziswa i-inki emnyama.
Zine. Umama webhabhathane kunye neNtombi Tattoo
Umthombo: @ hive.mother nge-Instagram
Umthombo: @markfanara nge-Instagram
Umthombo: @ sarah.ciuk nge-Instagram
Umthombo: @watchtowertattooco nge-Instagram
Amabhabhathane lolunye loyilo oludumileyo lokudibanisa iitattoo zikamama, kunye nezizathu ezifanelekileyo. Amabhabhathane abonisa utshintsho nokuzalwa kwakhona, kwaye zimbalwa izinto ezinokuphinda zilungelelanise ubomi njengokuzisa umntwana emhlabeni. Iibhabhathane zikwabonelela amagcisa ngethuba elifanelekileyo lokubandakanya imibala edlamkileyo abaninzi baziva bemele ubuntu babo.
Nokuba ngamanqwanqwa amileyo okanye afakwe kuyilo olukhulu, itattoo yamabhabhathane lukhetho olukhulu kubugcisa bomama oyintombazana obonisa tattoo. Ezi ziqwenga zibalaseleyo ngumzekelo nje wento enokwenzeka ngobu buhlobo bunzulu njengokuphefumlelwa.
5. Umama OyiNtombikayise Tattoo
Umthombo: @pinklightsaber nge-Instagram
izimvo zokulungisa umhlaba ngasemva ngaphandle kwengca
Umthombo: @ just_ron14 nge-Instagram
Umthombo: @sharlene_dawn nge-Instagram
Umthombo: @ blackheart.713 nge-Instagram
Umthombo: @caddydaddys_tattoo_piercing nge-Instagram
Umthombo: @_sweetbtattoos_ nge-Instagram
Umthombo: @ laurabecker3 nge-Instagram
Umthombo: @ peezee3 nge-Instagram
Umthombo: @joeosborne_tattoos nge-Instagram
I-inki yombala ayijongi nje kakuhle kwiintyatyambo kunye namabhabhathane; Ngapha koko ukusetyenziswa kwemibala eqaqambileyo kunokunyusa itottoo yomama eyahlukileyo. Abanye abantu bakhetha umbono we tattoo othatha indlela yokubonisa ekhumbuza oopopayi, ngelixa abanye benza uyilo lokwenyani olubonisa imifanekiso ebomini.
Umvambo weMandala , Uyilo lwezilwanyana kunye neefoto zinokugqitywa kusetyenziswa imibala eqaqambileyo kwaye yeyona ndlela ifanelekileyo yokukhumbula eso sifungo sobuntwana, isithembiso sepinky. Ezi ntombi zikamama zinkulu ziyabonisa nje ukuba zinjani imibala ye-inki xa igcisa lobugcisa be tattoo lithatha umatshini.
6. Umama kunye nentombi enobuthathaka Tattoo
Umthombo: @lennyresplendent nge-Instagram
Umthombo: @markcosgrove_tattoo nge-Instagram
Umthombo: @metal_euphoria nge-Instagram
Umthombo: @tattoosbyroachzilla nge-Instagram
Umthombo: @ 13bluebell nge-Instagram
Umthombo: @scott_nguyen_tattoos nge-Instagram
Umthombo: @bass_biatch nge-Instagram
Umthombo: @crossedoutart nge-Instagram
Umthombo: @chris_nina nge-Instagram
Xa usiya kwindawo yokubhala iitatoo, uninzi lwamaxesha okuqala lusenokoyikiswa ziiyilo ezinkulu ze-inki ezigqunywe ngamagcisa, nangona iivenkile zetattoo zanamhlanje zingezizo iindawo ezirhabaxa nezibi ezazikho ngaphambili. Ezi ntsuku i-tattoo parlor inezinto ezininzi ezifanayo kunye neegalari ezintle zobugcisa kunamagumbi angasemva atshayayo. Umsebenzi we tattoo ocekeceke uyahlonitshwa njengemigca engqindilili kunye nemibala eqaqambileyo.
Le ndlela efihlakeleyo sele ithandwa kakhulu-ngakumbi phakathi kwamanenekazi ajonge ukufumana umvambo ofanayo. Umzobi we tattoo unokwenza uyilo olupholileyo lwe tattoo esebenzisa imigca ethe-ethe. Nokuba y tattoo elula yesihlahla, okanye unyawo; iintyatyambo ezidlamkileyo, umgca womsebenzi owoyisiweyo okanye itattoo entle; I-inki ethe-ethe yeyona ndlela ifanelekileyo yokukhumbula uthando phakathi komama oyintombazana.
7. Umama wentliziyo kunye nentombi yeTattoo Idea
Umthombo: @ katechristine04 nge-Instagram
Umthombo: @ mzcarriebaby77 nge-Instagram
Umthombo: @ gmoney23 nge-Instagram
Umthombo: @ tn_vaper16 nge-Instagram
Umthombo: @makeup_by_irina nge-Instagram
Umthombo: @kriddlescrystalina nge-Instagram
Umthombo: @vincentmoisdon_cfs nge-Instagram
Umthombo: @colorfaststudios nge-Instagram
Umthombo: @ pablotattoo8 nge-Instagram
Ngokukhawuleza iyaziwa, i-tattoo yentliziyo ibisisiseko sobugcisa bomzimba osisigxina kwizizukulwana. Ukusuka kwinguqulelo yesiqhelo yaseMelika, egcwaliswe ngetolo lokugqobhoza, ukuya kutoliko lwanamhlanje, kukho into enomdla ngetattoo yentliziyo.
Zifaneleke ngakumbi xa kusiziwa kwii-tattoos ezinikezelweyo kuthando phakathi kukamama nentombi kwaye iintliziyo zinokusetyenziswa kumvambo owahlukileyo.
Abanye abantu bakhetha ukuzimela I tattoo yentliziyo , Ngelixa ezinye zibandakanya izinto ezahlukeneyo- ukubhala ngesandla kukamama, usuku loomama, itattoo engapheliyo, kunye nokunye ukubhala ngesandla kuyathandwa- ukwenza umbono we tattoo onamandla ngakumbi.
8. Umama oNtsha weNtombi i-Tattoo Idea
Umthombo: @queeniestory nge-Instagram
Umthombo: @ amayo5.7 nge-Instagram
Umthombo: @ brendaversion2.0 nge-Instagram
Umthombo: @post_apocalipstick nge-Instagram
Uyilo lobugcisa be-tattoo chef
Umthombo: @damn_fine_tattoos nge-Instagram
Umthombo: @ dbay_ard18 nge-Instagram
Umthombo: @jon_doe_tattoos nge-Instagram
Umthombo: @kellymerrittsellsaz nge-Instagram
Igcisa elilungileyo lihlala lityhala imida yezinto ezinokwenzeka kuyilo lwe tattoo. Zimbalwa iindlela zobugcisa apho obu buchwephesha buhlala bubonakala ngakumbi kunelizwe lobugcisa bomzimba osisigxina. Ngapha koko, inqanaba lesakhono sobuchwephesha esibonakalisiweyo kwimisebenzi yanamhlanje yeetattoo iya kwenza abanye babazobi kwiminyaka nje engamashumi amabini eyadlulayo.
Ukusuka kuyilo lwe-hyperrealist, ukuya kumvambo we-mandala ontsonkothileyo usebenzisa ubunzima Iipateni zejiyometri ukufuna okungapheliyo koyilo olutsha nolunomdla kuyamangalisa.
Ezi zinto zomlilo zinokufakwa kwiitattoo zomama njengempumelelo njengalo naluphi na olunye uyilo, kwaye ezi tattoos zeengcali ziyimizekelo emihle yezinto ezinokwenzeka kwihlabathi lokudibanisa itattoo.
9. Imizekelo emihle yeTattoo ene-Linework
Umthombo: @aces_n_spades_tattoo nge-Instagram
Umthombo: @ bob_hughes_125 nge-Instagram
Umthombo: @alinasauve nge-Instagram
Umthombo: @danadynamite_ nge-Instagram
Umthombo: @djcamote nge-Instagram
Eyona nto ibaluleke kakhulu efunekayo ukwenza umvambo ophumeleleyo ngumsebenzi wolayini. Ngapha koko, xa kuvavanywa omnye umsebenzi womzobi we-tattoo, imigca yinto yokuqala eya kuqatshelwa, kwaye ngesizathu esivakalayo. Ngaphandle kweempawu zomsebenzi ezichanekileyo nezingaguquguqukiyo zinotyekelo lokuba ziibhlongo ze-amorphous njengobudala, yiyo loo nto umvambo mdala wesibindi uza kubamba uhlala ukufutshane neentliziyo zabazobi abaninzi.
Indima yemigca kwi tattoo ibalulekile kangangokuba amagcisa amaninzi akhetha ukwenza uyilo olujonga nawuphi na umbala okanye ukufiphaza kwaye luxhomekeke ngokupheleleyo kwimigca yokuthwala isiqwenga. Lo ngumkhwa okhulayo kunye nemizekelo emininzi eyimpumelelo kulo lonke ishishini, kwaye ezi ntombi zikamama ziintatto ziluhlobo nje lwesitayile.
10. Iskripthi seNtombi kaMama
Umthombo: @lxx__ink nge-Instagram
Umthombo: @calamitous_nerd nge-Instagram
Umthombo: @__ ally_______ nge-Instagram
Umthombo: @ jessiboo1977 nge-Instagram
Iinwele zeenwele ezirhangqileyo zeenwele
Umthombo: @ c.u.m.m.i.n.s nge-Instagram
Umthombo: @crystalheadtattoo_ nge-Instagram
Umthombo: @tattooedndbeautiful nge-Instagram
Umthombo: @alishareferda nge-Instagram
Iskripthi ibe yeyona nto iphambili kumvambo wamashumi eminyaka, kwaye ngesizathu esivakalayo. Abanye abantu bafuna ukutsiba ukungacacanga kolunye uyilo kwaye basike ngqo kwinqanaba ngokufaka amagama kunye namagama abalulekileyo kwimizimba yabo.
Olunye uhlobo olubonakalisiweyo kwezi ntombi zikamama zihambelanayo kukuthatha iisampulu zokubhalwa ngesandla komnye nomnye kwaye usebenzise oku njengetemplate ye tattoo. Zimbalwa izinto ezinokubaluleka kangako njengokubhala ngesandla kukanyoko ngokusisigxina emzimbeni wakho.
11. Umama oLula weNtombi iTattoo Idea
Umthombo: @thelexfiles_tattoos nge-Instagram
Umthombo: @tatutomrock nge-Instagram
Umthombo: @shezeepeezee nge-Instagram
Umthombo: @kayla_marie_burke nge-Instagram
Umthombo: @bishoptattoo nge-Instagram
Umthombo: @ nytiffany13 nge-Instagram
Umthombo: @luminaryink_tattoos_vermont nge-Instagram
Umthombo: @a_place_to_print_and_sew nge-Instagram
Umthombo: @ ariana_lorraine93 nge-Instagram
Umthombo: @cjwarrant nge-Instagram
Umthombo: @zebratattooz nge-Instagram
Abanye abantu bakhetha uyilo olukhulu ukucacisa uluvo lwabo. Abanye bakhetha indlela ethobekileyo kwaye elula kubugcisa bomzimba abakhethayo. Kukho isibheno esingaphantsi kwesicelo se- itattoo encinci okanye uyilo olulula olwatsiba iinkcukacha ezintsonkothileyo ngenxa yendlela encinci. Ukusuka kumaqhina e-Celtic eyenziwe lula, ukuya kwiisimboli zeentombi zoomama, i-inki ehambelanayo ecocekileyo inokubonisa ukuba ngamanye amaxesha kuncinci ngokwenyani kuninzi. Ezi tattoos zibalaseleyo yimizekelo emihle yento enokwenzeka ngegcisa elinetalente kunye nendlela ethobekileyo.
Umama weNtombi yeTattoo FAQ
Zithini iisimboli zikamama nentombi yakhe?
Umama uzisa intombi yakhe kweli hlabathi, kwaye asebenze njengesikhokelo ebomini bakhe. Amandla ale ndima adluliselwa kwiindlela ezahlukeneyo zetattoo ezibonisa indima ebalulekileyo abayidlalayo ebomini bomnye nomnye.
Umnqamlezo onehupula ephezulu, eyaziwa ngokuba yi-ankh, luphawu olunemvelaphi yase-Egypt yakudala. I-ankh imele impefumlo yobomi, esisizathu esinye esihlala sinxulunyaniswa nobudlelwane bentombi.
Iintyatyambo ze-Carnation zikwangumqondiso onomdla wothando lukamama. Kuthe kwavela kwingcwaba likaMariya iNtombi, ii-carnations ziyintyatyambo e-odolwe kakhulu ngoMhla woMama.
Ezi-kunye nezinye izifundo ezininzi-zinokwenza ukuba umama ongumntwana oyintombazana abonakalise ukubaluleka kokudlala ebomini babo.
Luyintoni uphawu lweCeltic lomama nentombi?
Amaqhina amaninzi e-Celtic adibene nobudlelwane phakathi kukamama nentombi, kodwa eyona nto ixhaphakileyo yi-stylized triquetra, ihlala ibandakanya intliziyo kuyilo.
Olunye uyilo oludumileyo lweCeltic lunecala elinye, elinamacandelo aphezulu kunye asezantsi ixesha elide kunamacandelo asemacaleni kwaye zonke zinxulunyaniswa nomsebenzi weqhina eliphambili embindini. Zombini zoyilo zibonisa ubudlelwane obudibanisa umama nentombi kunye.
Umsebenzi weCeltic yindlela egqibeleleyo yokubonisa umama oyintombazana entle obonisa umvambo kwisibheno esibonakalayo kunye nethuba lokwenza ulwaziso kumvambo ofanayo.
Ngaba ujonge ukukhuthazeka ngakumbi ekucwangciseni i-tattoo entsha? Cofa kwiikhonkco ezingezantsi ukuze ufumane iigalari ezipholileyo ngakumbi.
Iingcamango zeCeltic Knot Tattoo
Uyilo lweTatoo engafakwanga
Iingcamango zeThatterfly Tattoo
Iitattoos zelanga ezi-35 zelanga kunye nenyanga
Umama kunye nentombi iisimboli ze tattoo
ipiston kunye nokuyilwa kwe tattoo
uve ububi ungaboni tatoo mbi
I-tattoo sleeve filler imibono yendoda
iiTattoos ezincinci ezinemibala yabasetyhini
iindledlana zomnyango wangaphambili kunye neendlela
izimvo zokulala ezincinci kubafana